Diiwaangelinta Tallaalka COVID-19
Diiwaanka Tallaalka COVID-19 ee Wisconsin
Qof kasta oo da'diisu tahay 5 ama ka weyn ayaa hadda qaadan kara tallaalka COVID-19. Tallaalku waa bilaash, caddeynta caymiska, aqoonsiga shakhsiga, ama dhalashada looma baahna.
Dadweynaha Tallaalka Raba ee Milwaukee – Waaxda Caafimaadka ee Magaalada Milwaukee kilinigyadeeda tallaalka (Northwest Health Center, South Side Health Center, iyo Menomonee Valley) ballan la'aan ayaa la imaadaa oo la iska diiwaangeliyaa. Qofkii raba intarnetka ayuu ku soo buuxin karaa foomka diiwaangelinta. Tallaabada ugu dambeysa diiwaangelinta waa in la calaamadiyo goobta ballanta, taariikhda, iyo wakhtiga – laakiin maaddaama la iska imaado ballan la'aan goobaha magaalada Milwaukee, uma baahnid in aad ka jawaabto tallaabada ugu dambeysa. Goobo kale oo ku yaalla Milwaukee ayaa la iska imaan karaa ballan la'aan oo ballan ayaa laga qabsan karaa.
Isdiiwaangeli hadda si aad u qabsatid ballanta tallaalka COVID-19
Wisconsin Department of Health Services (Waaxda Adeegyada Caafimaadka ee Wisconsin ama DHS) waxay taageereysaa Center for Disease Control and Prevention’s (Xarunta Xakameynta iyo Ka-hortegidda Cudurrada ama CDC) talooyinkeeda ah COVID-19 inuu tallaalku u yahay difaaca ugu fiican ee lagu yareyn karo faafidda faayruska COVID-19.
DHS iyo CDC waxay ku dhawaaqeen in ay carruuta gaartay 5 sano ilaa 11 sano hadda qaadan karaan tallaalka Pfizer-BioNTech (Pfizer) COVID-19. Tallaalka Pfizer COVID-19 waa in ay carruurtu qaataan laba jeer oo ay u dhaxeyso 21 maalmood si ay uga helaan difaac buuxa, oo noocan ayaa ah kan keliya ee ugu horreeya ee carruurta la siin karo.
DHS iyo CDC dadka qaarkood ayey kula talinayaan tallaal xoojin ah. Gebi ahaan saddexda tallaal ee COVID-19 ee Mareykanka waxaa dadka lagula talinayaa tallaal kale oo xoojin ah.
Dadka soo socda ayaa heli kara tallaalka xoojinta ah haddii ay qaateen:
Johnson & Johnson tallaalkooda COVID-19 ugu yaraan laba (2) bilood ka hor
Moderna labada jeer ee tallaalladooda ugu yaraan shan (5) bilood ka hor balse waa in ay yihiin 18 jir ama ka weyn
Pfizer labada jeer ee tallaalladooda ugu yaraan shan (5) bilood ka hor balse waa in ay yihiin 12 jir ama ka weyn
DHS iyo CDC talooyinkooda hadda waa in la isku qasi karo tallaallada xoojinta ah. Dadka xaqa u leh waxay qaadan karaan tallaal kasta oo ah xoojin oo ay ka heli karaan – Moderna, Johnson & Johnson, ama Pfizer. Dadka qaar ayaa doorbidi kara tallaalkii ay horay u qaateen markii hore, balse qaar ayaa doorbidi kara tallaal nooc kale oo u ah xoojin.
Tallaalka Xoojiyaha Labaad:
DHS iyo CDC dadka qaarkood ayey kula talinayaan tallaal labaad oo ah xoojiye. Moderna iyo Pfizer ayaa lagu heli karaa tallaalka labaad ee ah xoojiyaha. Talooyinka DHS:
Tallaal ah xoojiye labaad oo ah Pfizer ama Moderna in ay qaataan dadka gaaray ama ka weyn 50 jir ugu yaraan afar (4) bilood ka dib marka ay qaataan tallaallada kale ee COVID-19 ee lagula taliyey
Tallaal labaad oo ah xoojiyaha Pfizer ama Moderna ee 18 jir ilaa 49 jir marka ay qaataan tallaalka Janssen oo u ahaa tallaalkii koowaad iyo xoojiyihii ugu yaraan afar (4) bilood ka dib markay qaataan xoojiyaha Janssen
Tallaal ah xoojiyaha labaad ee Pfizer ee dhallinta gaartay ama ka weyn 12 jir ee uu caadi ahaan ama si daran u liito difaacooda jirka ugu yaraan afar (4) bilood ka dib markay qaataan xoojiyihii koowaad (waxaa laga hadlayaa dadka xubno loo geliyey, ama la nool xaalado caafimaad oo loo tixgelin karo in ay yihiin heer uu difaaca jirkoodu aad u liito)
Tallaal labaad oo ah xoojiyaha Moderna in ay qaataan dadka gaaray ama ka weyn 18 jir ee uu caadi ahaan ama si daran u liito difaacooda jirka ugu yaraan afar (4) bilood ka dib markay qaataan xoojiyihii koowaad
Tallaalka dheeraadka ah:
DHS iyo CDC waxa ay kula talinayaan dadka uu difaaca jirkoodu yahay mid hooseeya ama aad u daciifsan in ay qaataan tallaalka dheeraadka ah ee mRNA COVID-19 ugu yaraan 28 maalmood ka dib markay qaateen qeybtii labaad ee Pfizer ama Moderna tallaalkooda. Wixii la xiriira faahfaahinta tallaalka dheeraadka ah, booqo DHS Tallaalka Kale COVID-19 Dheeraad ah boggooda intarnetka.
Si laguugu caawiyo diiwaangelinta ballanta ama caawimaad kale oo ah diiwaanka tallaalka, fadlan soo garaac 844-684-1064 (lacag-la'aan). Wixii faahfaahin ah oo ku saabsan diiwaanka tallaalka, sida liiska goobaha laga qaadan karo, booqo Wisconsin Department of Health Services (Waaxda Adeegyada Caafimaadka ee Wisconsin) bogga intarnetka ee diiwaanka tallalka COVID-19.
Fiiro gaar ah: Boggani wuxuu u baahan yahay adeegsiga noocyadan baroowsarada ee soo socda: Google Chrome (nooca ugu dambeeyay), Microsoft Edge (nooca ugu dambeeyay), Safari (nooca ugu dambeeyay)